Dogecoin Wallets: Maitiro ekuisa iyo yepamutemo maWallets paGNU / Linux? | Kubva kuLinux
Nhasi, isu tinopinda zvekare zvakare nyika yemahara uye yakavhurika software (kunyorera) zviitiko mumunda we Cryptocurrencies uye DeFi. Kunyanya isu tichaongorora Chii uye sei zviri zvepamutemo Dogecoin Wallets akaisirwa paGNU / Linux?
Nenzira yakadaro, kana tikakwanisa kusimbisa zvakare uye kuramba tichinyanya kubatsira, kuratidza Mahara uye akavhurika mashandiro, kunyanya izvo zvakavakirwa pa GNU / Linux, iwo akanaka kune kuchera / kuchengetedza akasiyana Crypto zvinhu zviripo, senge Bitcoin, Dogecoin, pakati pevamwe vazhinji.
MinerGate: Maitiro ekuisa sei iyi Miner Software paGNU / Linux?
Uye kuzadzisa musoro wenyaya kuti utariswe uye usati wapinda zvizere mauri, senguva dzose, tichakurudzira izvozvo pakupera kuverenga bhuku iriKana iwo musoro wenyaya wakanyanya kufarira munzvimbo ino, verenga zvinotevera zvinyorwa zvakabatana izvozvo zvinobatsira zvikuru.
Sezvo, mavari vachawana mijenya ruzivo rwakabatana on:
Ndeapi maSystem Anoshanda uye mashandisirwo aripo uye anogona kushandiswa nyore nyore kuDigital Mining?
Maitiro ekugadzirisa / kugadzirisa GNU / Linux Distros kune yangu / kuchengeta akasiyana maCryptoassets?
Zvishandiso zvakanakisa zvemigodhi ye cryptocurrency
Mamwe Maitiro Ekushandisa MaDhijitari Mining
MinerOS GNU / Linux: Inoshanda Sisitimu yeDhijitari Mining (MilagrOS)
1 Dogecoin Wallets: Mahofisi Wallets
1.1 Chii chiri uye sei maDogecoin Wallets akaiswa paGNU / Linux?
1.1.1 Chii chinonzi Dogecoin?
1.1.2 Dogecoin Wallets: MultiDoge uye Dogecoin Core
1.2 Dzidza zvakawanda nezve Cryptocurrencies uye DeFi
Dogecoin Wallets: Mahofisi Wallets
Chii chiri uye sei maDogecoin Wallets akaiswa paGNU / Linux?
Asati ataura Ndezvipi uye zvakaiswa sei?, zvakanaka kujekesa izvo, nekuda kwekusiyana kukuru kwe GNU / Linux Maitiro Ekushandisa, zvirokwazvo iwe unozofanirwa kuisa uye / kana kuumbiridza zvimwe mapakeji / maraibhurari zvakafanira pamberi.
Mune yedu inoshanda kesi, kuiswa kwe "Dogecoin Wallets" Izvo zvichaitwa pa Pindura (Snapshot) tsika inonzi Zvishamiso GNU / Linux iyo yakavakirwa pa MX Linux uye yakavakwa ichitevera yedu «Tungamira kune Snapshot MX Linux» uye yakagadzirirwa Dhijitari Mining yeCrypto Assets, zvichitevera pakati pemazano mazhinji, ayo akaverengerwa mubhuku redu akadana «Chinja yako GNU / Linux kuita Anoshanda Sisitimu yakakodzera kune Dhijitari Mining».
Chii chinonzi Dogecoin?
Maererano ne Yepamutemo Webhusaiti zvakafanana, zvinotsanangurwa seinotevera:
"Sosi yakavhurika, peer-to-peer mari yemadhijitari iyo inobvumidza iwe kutumira mari online. Funga nezvaDogecoin se "Mari yeInternet."".
Dogecoin Wallets: MultiDoge uye Dogecoin Core
Kamwe mune iyo Dogecoin saiti yepamutemo, isu tinongofanirwa kuita zvinotevera:
Dhinda pikicha yeLinux pasi pemashoko anoti: "KUTANGA KUSHANDISA DOGECOIN TODAY"
Wobva warodha pasi imwe kana zvese zviri zviviri "Dogecoin Wallets" o Zvikwama / Purses kuisa uye kushandisa.
Tevere, uye mune iyo kesi ye MultiDoge, yakambotorwa nekuita iyo ".Jar faira" zvazvino (multidoge-0.1.7-linux.jar) uchishandisa Java kana OpenJDK, zvidzitiro zviri pazasi zvinoratidza matanho anotevera:
Tevere, uye mune iyo kesi ye Dogecoin Core, yakambotorwa pasi ndokusunungura zip ".Tar.gz faira" zvazvino (dogecoin-1.14.2-x86_64-linux-gnu.tar.gz) inongoda kumhanya, kuburikidza neterminal (koni) iyo "Dogecoin-qt faira" , munzira:
Sekuratidzwa kwescreenshots, anotevera matanho:
Dzidza zvakawanda nezve Cryptocurrencies uye DeFi
Hongu, mushure mekuverenga bhuku iri iwe unoda kuramba uchidzidza zvishoma pamusoro peiyi yese yemahara uye yakavhurika tekinoroji shamba, tinokurudzira kuti uongorore izvi zvimwe zvinyorwa:
DeFi: Yakatemerwa Mari, Yakavhurwa Sosi Yemari Ecosystem
Tinovimba izvi "inobatsira shoma posvo" nezve «Dogecoin Wallets» machinda, kureva Chii chiri uye sei maDogecoin Wallets akaiswa paGNU / Linux?, inobatsira zvakanyanya kune avo vanoshandisa yavo yemahara uye yakavhurika MaSystem eSystem kumigodhi / kuchengeta kwavo kwakasiyana Crypto zvinhu, se Dogecoin uye zvimwe, uye izvo zvakare zvinonakidza uye zvinoshandiswa, kune iyo yese «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» uye yemupiro mukuru mukupararira kweinoshamisa, hombe uye kukura ecosystem yezvishandiso zve «GNU/Linux».
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Dogecoin Wallets: Maitiro ekuisa iyo yepamutemo maWallets paGNU / Linux?
GOS-P4: Kuongorora yakakura uye iri kukura Google Open Source - Chikamu 4